Markab dagaalkii labaad ee aduunka degay oo 72 sano ka dib la helay - BBC News Somali
Markab dagaalkii labaad ee aduunka degay oo 72 sano ka dib la helay
Image caption Markabka Indianapolis oo taagnaa Pearl Harbor, 1937
Markab wayn oo kuwa dagaalka ah oo ay iska lahaayeen Maraykanka islamarkana dagaalkii labaad ee aduunka uu quusiyay Markab ay lahaayeen Japan ayaa la helay 72 sano ka dib.
Markabkan dagaal ayaa la helay isaga oo ay ka soo jeedo 18,000 feet badda dusheeda.
Markabkani dagaal oo lagu magacaabi jiray Indianapolis ayaa la burburiyay ka dib markii uu ka soo laabtay howlgal qarsoodi ahaa oo uu ku gaynayay banbaanooyiinkii Atomikada taasi oo markii danbe loo adeegsaday weerarkii nuyulkeerka ee Hiroshima.
Markabkani degay dagaalkii labaad ee aduunka ayaa waxaaa saarnaa 1,196 askari, waxaana laga soo badbaadiyay oo kali ah 316 -taasi oo ahayd qasaarihii ugu waynaa ee soo gaara taariikhda ciidamada badda Maraykanka.
Paul Allen,oo ka mid ah dadkii asaasay shirkada Microsoft, oo hogaaminayay kooxdii baadigoobka markabkan ayaa ku tilmaamay helida markabkan mid farxad leh.
Markabkani Maraykanka ee lagu magacaabo Indianapolis ayaa waxaa lagu burburiyay 30 July 1945 badda u dhaxaysa Philippine iyo jasiirada Guam.
Markab ah kuwa Gunjiska oo ay lahaayeen Japan ayaa ku dhuftay hubka maraakiibta lagu burburiyo taasi oo horseeday in markabka uu dego.
Lahaanshaha sawirka PAUL G ALLEN
Image caption Goobtii markabka lagu tuhunsanaa
Markabka ayaa muddo 12 daqiiqo gudahood ah ku quusay iyada oo aan wax digniin ah la bixin islamarkana ilaa xiligaas wax badan lagama ogayn halkii uu ku danbeeyay.
Mr Allen ayaa sheegay in markabkan la helay 18 bishan August,ka dib markii nin taariikhda ku xeeldheer uu farta ugu fiiqay goobtii ugu danbaysay ee lagu arkay markabkan dagaal ka hor inta uusan quusin.
'Qofkii ugu da'da waynaa dunida oo ku dhintay 117 sano'
Teleefoonkii Hitler oo lagu xaraashayo Mareykanka
Markabkan ayaa caan ku ahaa howgalkii qarsoodiga ahaa ee hubkii Atoomikada ee loogu magac daray wiilkii yaraa ama "Little Boy" kaasi oo lagu garaacay magaalada Hiroshima ee dalka Japan.
Image caption Qayb ka mid ah Markabka oo magacyo ku xardhan yihiin
Afar maalmood ka dib howlgalkaasi ayuu quusay markabkani lagu magacaabo Indianapoli.
Waxaa sidoo kale xilligaasi ay Maraykanka fuliyeen weerarkii kale ee Niyukleerka ee lagu qaaday Nagasaki,taasi oo Japan ku qasabtay in ay is dhiibaan.
Bayaan ay soo saareen kooxdii baadigoobka ugu jirtay markabkan ayaa waxa ay sheegeen in markabkani ahaan doono hantida ciidamada badda Maraykankanka uuna noqon doono xusuusta dagaalkii labaad ee aduunka.